Soo-saareyaasha boorsada kaamamka kaamamka biyuhu soo-saareyaasha & Alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha
Bacda Bannaanka Bannaanka
Ku habboon boorsooyinka loogu talagalay safarka dibedda, dalxiisyada, fuulitaanka buuraha, socodka iyo doonta. 1680D-TPU qalab tayo sare leh oo biyuhu xiraan iyo jiinyeer hawada sare dhagan oo khadka sare leh ayaa ka dhigaya mid ku habboon safarka dibadda. Awoodda ballaaran ee 30-ka litir ah ayaa haysa dhammaan waxyaabaha aad u baahan tahay. Waxay xitaa dul sabayn kartaa biyaha oo waxay kuu noqon kartaa noloshaada waqtiyada adag.
Boorsada Safarka Biyo La'aanta
Bacda safarka isboortiga ee dibadda, 1680D-TPU wax, qalab tayo sare leh oo hawo leh, jiinyeer 30 litir ah. Naqshadda adag ee jirka bacda waa mid aan biyuhu xirin, xirna u adkaysta, oo waarta. Waxay ku habboon tahay buuraha, socodka, safarka, jir dhiska iyo muuqaalada kale.
Boorsada mootada ee biyuhu xiraan
PVC tayo sare leh boorsada dibedda ee biyuhu ka soo baxaan. Awood ballaaran oo ah 40 litir. Nidaamka sidashada Ergonomic iyo nidaamka ka laadlaadda dibedda oo qumman. Aad ugu habboon isticmaalka buurta. Shirkaddu sidoo kale waxay bixin kartaa adeegyo la habeeyay si loo habeeyo qaabkaaga gaarka ah.
Tababarka Jimicsiga Dabaasha ee Qoyan PVC boorso qallalan
Bac wanaagsan oo qoyan iyo qalalan ma aha oo kaliya dabaasha. Naqshadeynta midabka buluuga iyo madow ee casriga ah, nooc nadiif ah oo hagaagsan. Hadday dabbaasho, jimicsi, yoga, ama safar, waa xulasho aad u wanaagsan. Qalabka PVC, 30 litir oo ballaaran. Xulashada ugu wanaagsan ee boorsooyinka qoyan iyo kuwa qalalan.
Boorsada qallalan ee biyuhu qallajiso
Bacda qalalan ee biyaha ka baxsan ee xisaabta ku darsata muuqaalka iyo waxqabadka labadaba. Awood dhexdhexaad ah oo ah 25 litir, ha ka welwelin culeyska xad dhaafka ah. Adiga oo isticmaalaya dhar PVC-cufan leh, oo aan biyuhu aad u ool ahayn. Waxay la qabsan kartaa bey'adaha qoyan sida xeebaha, wabiyada, ama roobka. Jeebka dhinacyadu wuu ka hortagi karaa alaabada. Isticmaalka nuugista naxdinta sayniska iyo nidaamka yareynta culeyska ayaa kuu oggolaanaya inaad si fudud ugu safarto.
Bacaha isboortiga bannaanka ee aan biyuhu xirin
Boorsada biyuhu qafilan yihiin, dharka qafilan ee dharka u adkaysta, ilmada u adkaysta, biyuhu diidaan, ku habboon in la qaado, oo si fudud loo furo. Waxay leedahay fudayd adeegsi iyo raaxo labadaba, kuu saamaxaysa inaad si fudud oo nabadgelyo leh ugu soo noqoto mar kasta oo aad tacabir iyo safar ku jirto
Shandad dibedda ah oo aan shaqeyneynin oo badan. Adeegsiga wax-qabadka sare ee wax-soo-saarka TPU, biyo-la’aanta iyo xirashada u adkaysta. Shaqada adag ee biyuhu galaan, oo ku habboon fuulitaanka buuraha, safarka, doonyaha iyo howlaha kale ee bannaanka.
Boorsada Milatariga ee Kaabbagaarta
Tayada sare ee 900D-TPU oo ah qalab aan biyuhu soo marin, awood 20L ah, bac bacad-biyood leh oo qaab-dhismeedka kambuyuutar oo tayo-milatari leh. Waxay noqon doontaa kaaliyahaaga ugu fiican dagaalka.
Boorsada Safarka Bannaanka ee Biyaha
Boorsada dibedda ee biyaha aan safarka lahayn oo leh awood 40L ah waa mid adag oo xirashada u adkaysta, ma fududa in waxyeello la gaadhsiiyo, waana sahlan tahay in lala soo baxo. Waa xulashadaada ugu fiican safarka, fuulitaanka iyo socodka.
Boorsada dhabarka ee biyaha celiya ee TPU
Shandaddan ayaa laga sameeyay naylon, TPU, iyo walxo isku dhafan oo PVC ah. Jirka ugu weyn waxaa laga sameeyaa maaddada TPU ee biyuhu xiraan. Waxaa jira jeeb ku yaal banaanka boorsada si loo dhigo waxyaabo yar yar, awoodda guud waa weyn tahay qaabkuna waa buuxo. Furitaanka boorsada waxay aqbashaa naqshad duubis ah, cabbirka si xor ah ayaa loo waafajin karaa. Dabacsan in la isticmaalo.